Period Tracker Clue အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
51.0 for Android
4.7 | 10,000,000+ ထည့်သွင်းရန်
ဒေါင်းလုပ် APK（16.2MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Period Tracker Clue: Cycle & Ovulation Calendar
သဲလွန်စသည်အချိန်ကာလတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။ သင်၏ရာသီလာခြင်းသံသရာသည်သင်၏စိတ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းလေ့လာရန်သင်အက်ပလီကေးရှင်းသည်သိပ္ပံနှင့်အချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသည်။ သဲလွန်စသံသရာ tracker ဖြင့်သင်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သောကာလနှင့် pms နှင့် pmms ကြိုတင်ဟောကိန်းများသည်သင်၏သံသရာတစ်လျှောက်လုံးတွင်မည်သည့်အချက်များ, မျိုးပွားခြင်းနှင့်စွမ်းအင်အဆင့်များပြောင်းလဲခြင်း, သိပ္ပံဖောက်ထွင်းမှုနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ကျန်းမာရေးစွယ်စုံကျမ်းများပြောင်းလဲနိုင်သည်။ လက်ချောင်းများ။ သင်လည်းစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည့် ovulation နှင့်ကာလသတိပေးချက်များကိုလည်းသင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်လာမယ့်အရာအတွက်အမြဲတမ်းပြင်ဆင်ထားသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များအားကျင့်0တ်များနှင့်အမျိုးသမီး ဦး စီးမှုဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသည်။
သင်၏ဘဝအဆင့်မည်သို့ပင်ရှိပါစေသဲလွန်စသည်သင်၏နောက်ကျောကိုရရှိခဲ့သည်။ ကာလ မှစ. ကလေးမွေးဖွားခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန် (သို့) သားကောင်များနေ့တွင်အသိပေးချက်များကိုရယူရန်သို့မဟုတ်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်၏ထူးခြားသောပုံစံများကိုရှာဖွေရန်သို့မဟုတ်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်၏ထူးခြားသောပုံစံများကိုရှာဖွေလိုသည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ထူးခြားသောပုံစံများကိုရှာဖွေလိုသည်ဖြစ်စေ, သန္ဓေတားခြင်းများပြုလုပ်လိုသည်ဖြစ်စေ, ရွေးချယ်မှုများ။
** အကောင်းဆုံးကလေးမွေးဖွားသူ 2020 - ကျန်းမာရေးလိုင်း **
tracker, ကာလပြက္ခဒိန်, သားကောင်, သားကောင်, ·သင်၏ရောဂါလက္ခဏာများ, စီးဆင်းမှုပြင်းထန်မှု, စိတ်ဓါတ်များနှင့်ပိုမိုများပြားလာခြင်းနှင့်သင်၏ bbtulations အတွက်သင်၏ BBTs ကိုခြေရာခံရန်နှင့်သင်၏ BBT
Perfect tracker & ရာသီပြက္ခဒို
> PMS, ITY နှင့် Ovulation ၏ခန့်မှန်းချက်အရသင်၏ကာလရက်စွဲများ, စီးဆင်းမှုပြင်းထန်မှုနှင့်သင်အသုံးပြုသောကာလကိုစက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်သင်အသုံးပြုသောစက်ဘီးစီးသည့်ခြေရာခံခြင်း
သင်၏သံသရာရှိပုံစံများကိုသင်၏နောက်လာမည့်ကာလ, Ovulation နှင့် PMS မတိုင်မီပြက္ခဒိန်သတိပေးချက်များကိုတပ်ဆင်ထား
b> မျိုးပွားရေးဆိုင်ရာ tracker:
မွေးဖွားခြင်းဆိုင်ရာကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ခြင်းနှင့်မျိုးပွားနိုင်သောသူငယ်ချင်းများသည်သင့်အားကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်ကြိုးစားနေပါကကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်ကြိုးပမ်းမှုအတွက်စိတ်0င်စားသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်
0 န်ကြီးကိုယ်0န်0န်ဆောင်အက်ပလီကေးရှင်းနှင့် ပတ်သတ်.0န်ဆောင်မှုပေးသည့်ရက်သတ္တပတ်များဖြင့်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည့်နေ့စွဲကိုကိုယ်ဝန်တွက်ချက်
သည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းလက္ခဏာများ, ကလေးလှုပ်ရှားမှုနှင့်အခြားအချိန်များပိုမိုများပြားလာသည်။ သင်၏ PR မှတစ်ဆင့်သင့်အားလမ်းပြရန်အချက်အလက်များ ရက်သတ္တပတ်အတွင်း egnancy တစ်ပတ်။
Views and cycle variations ကိုကြည့်ပါ။ သင်ရာသီလာခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောလက္ခဏာများကိုကြည့်ပါ Cycle
သင်၏ PCOS နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောသံသရာများကိုစီမံရန်သဲလွန်စကိုအသုံးပြုပါ။ သဲလွန်စသည်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်အထောက်အကူပြုသောကာလ tracker ဖြစ်သည်။ clue peat tracker app ကိုသင်၏ obgyn သို့ယူဆောင်လာပြီးသင်၏အချိန်ကာလကိုရရှိနိုင်သည့် Tracker နှင့် Ovulation app ကိုရရှိနိုင်ပါ။ ကြားနေသောဘာသာစကား ကလေးမွေးဖွားခြင်း, မွေးဖွားခြင်း, လိင်နှင့်လိင်တူချစ်သူအကြောင်းအရာများ။
သဲလွန်စ Tracker & Ovulation App
- သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုမိုနားလည်စေရန်ကူညီပေးသောရာသီစက်ဝန်း Tracker, Periodal app
Period tracking apps review | Clue, Eve, Period tracker lite
Dr. Shashi Rawat
"MY CALENDAR APP REVIEW" HOW NOT GET PREGNANT?HowtoGetPregnant? #CalendarMethod #PeriodTracker
Jeries Tecson Vlogs
MY CALENDAR PERIOD TRACKER | Pacham Diaries
Best period tracker #ovaulation tracker/telugu volgs/period tracker/telugu vlogs in Bangalore
Gayatri Sandur Telugu vlogs
Period Tracker Clue: Cycle & Ovulation Calendar 50.0